Madaxweynaha Tunisa oo geeriyooday | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Madaxweynaha Tunisa oo geeriyooday
Madaxweynaha Tunisa oo geeriyooday
Madaxweynihii dalka Tunisiya, Beji Caid Essebsi oo 92 jir ahaa ayaa geeriyooday , madaxtooyada ayaa sidaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay maanta oo Khamiis ah. Essebsi waxaa loo qaaday isbitaal militari Arbacadii.
Essebsi, oo door weyn ka qaatay u soo guurista dimuqraadiyada tan iyo sannadkii 2011kii, ayaa isbitaal la dhigay dhammaadkii bishii hore waxaana uu isbuuc ku sugnaa isbitaal ka dib markii uu qabtay “dhibaato caafimaad oo daran”.
Madaxweynaha ayaa laba jeer oo keliya soo muuqday tan iyo markii uu ka baxay isbitaalka 1dii Luulyo.
Xafiiskiisa wuxuu sii daayay muuqaal fiidiyow ah oo ku saabsan kulan madaxweynaha uu la yeeshay wasiirka gaashaandhigga Isniinta, Essebsi si muuqata ayuu daciif u ahaa, taasoo sare u qaadday welwelka ku saabsan taam ahaanshihiisa.
Sida ku xusan dastuurka dalka Tunisiya, guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa qabanaya xilka madaxweynaha muddo 45 ilaa 90 maalmood inta doorashada la qabanqaabinayo.
Essebsi wuxuu xafiiska la wareegay 2014kii ka dib kacdoonkii Carabta ee waddanka.
Dhawaan ayuu ku dhawaaqay inuusan u tartami doonin doorashada loo qorsheeyay bisha Noofembar, isagoo leh qof da ‘yar waa inuu dalka hoggaamiyaa.